ဝါးခယ်မ : မြန်မာ - ထိုင်း - ဘင်္ဂလားဒေ.ရှ် စစ်အင်အား နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်မှု
မြန်မာ - ထိုင်း - ဘင်္ဂလားဒေ.ရှ် စစ်အင်အား နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်မှု
ရာဇာကျော်မြင်. ရေးသားထားသော ဤ Post တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး စစ်မက်ရေးရအရအမြဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသင့်သော ဘင်္ဂလားဒေ့ နှင့် ထိုင်း တို့၏စစ်ဖက်အင်အားများအား မြန်မာ့တပ်မတော် ၏ အင်အားနှင့် ယှဉ်တွဲ၍ သုံးသပ်ဖော်ပြထားညခင်းများသည် စစ်ဖက်ရေးရာ စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် Post ကောင်း တစ်ခုဖြစ်သဖြင်. ကူးယူဖော်ပြပါသည် ။
မြန်မာ - 0
ဘင်္ဂလားဒေ.ရှ် - 2,280,000
ယိုးဒယား - 245,000
***မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရံစစ်အင်အားမရှိသဖြင့်တစ်ပန်းရှုံးလျှက်ရှိသည် အရံစစ်အင်အားဖြည့်တင်းသင့်သည်***
(Battle tank များ)
(သမာရိုးကျ စစ်လက်နက်များဖြစ်သော ယာဉ်ဆွဲဟောင်ဝစ်ဇာ စိန်ပြောင်း မော်တာ နောက်ပွင့်ရိုင်ဖယ်များ)
B - အနည်းငယ်
T - 695
*** အမြောက်တပ်ဖွဲ့ ဟာ ၁၉၉၀ နှစ်ဦးပိုင်းက စတင်ပြီး ၁၅၅ မမ နဲ့၁၂၂ မမ ဟောင်ဝဇ်ဇာ အမြောက်များ အပါအ၀င် MLRS အတွဲလိုက် ဒုံးပစ် စနစ်များ၊ ရာပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့အမြောက် ၊ စိန်ပြောင်းများကို စတင် တပ်ဆင် အဆင့်မြှင့်တင် လာပါတယ်..။ အဲဒီထဲမှာ အစ္စရေး ၊ တရုတ် ၊ ရုရှား နဲ့မြောက်ကိုရီးယား နိူင်ငံထုတ် လက်နက်တွေ အဓိက ပါဝင်တယ်လို့ လဲ ဆိုပါတယ်...
M - 235
T - 573
*** မြန်မာ့လေတပ်ဟာ ၁၉၆၂ ခုနှစ် နဲ့၁၉၇၀ ခုနှစ် ၀န်းကျင်က ၀ယ်ယူခဲ့တဲ့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့လေယာဉ် နဲ့ရဟတ်ယာဉ် မျိုးစုံ ၁၃၁ စီးလောက်သာ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ လေတပ်ဟာ အရွယ်အစားသေးငယ်ဆင်းရဲ ပြီး သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး၊ထောက်ပံ့ ရေး နဲ့ ကြည်းတပ်ရဲ့ စစ်ဆင်ရေး တစ်ချို့ လောက်ကိုသာ အထောက်အကူပြုနိူင်တဲ့ အနေအထားလဲ ဖြစ်ပါတယ်။၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ လေတပ်
T - 244
T - 146
T - 272
Submarine ကသုံနိုင်ငံလုံးဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီး လက်ဝယ်ရှိမရှိကို မထုတ်ပြန်သေးချေ
Aircraft Carrier (လေယာဉ်တင်သင်္ဘော)
Ref; Myanmar Defence Weapon , Myanmar Sea Man , Global Fire Power & ကိုရဲမိုး
Written by ရာဇာ ကျော်မြင့်
Posted by ဇာမဏီ at 2:45 PM